Battlezụ ahịa Battle.net
Deba aha tupu oge
Usoro ego igba ohuru ohuru
Trading Battle Net .com bụ obodo azụmaahịa nke ịzụ ahịa loom maara, mmelite, na akụkọ.
Gaa na uru uru ngwa ngwa
Enwere ike ịhọrọ oge agha, uru, ọnwụ ọnwụ
Ọ dịkarịa ala minit 30, enwere ike nweta uru 50%
Usoro nkwụnye ego ngwa ngwa na ndọrọ ego
Gaa na nchekwa njikwa akụ
Ijikwa nchekwa akụ
Nkà na ụzụ Blockchain, njikwa akụkọ ihe mere eme azụmahịa
Nnukwu nche usoro nchekwa
Gakwuru onye ọ bụla, uru dị elu
Ọkwa uru dị elu maka onye ọ bụla
Họrọ ihe egwu dị egwu
Obere isi obodo, nnukwu ilaghachi nwere ike
Isi obodo elu, njikwa ihe egwu na uru kwụsiri ike
Gaa usoro zọtọtọtọtọ nke ọma
Sistemụ zọtọtọtọtọ ezi
Niile na-amalite n'okpuru otu ọnọdụ
Asọmpi Ikike Onwe Gị Nke VS
Sistemụ teknụzụ Blockchain
Oge itinye ego oge nkeji iri atọ! Mkpụrụ nke okpukpu abụọ!
Usoro ahia ahia ziri ezi na oke iji teknụzụ blockchain dị ọcha, mgbanwe nke onye ọ bụla
Ego mmeputara ego
Ezigbo azụmahịa gburugburu ebe obibi
Na ntanetị dị mma yana igwe na-ebu ngwa ngwa dị elu
Ngwa ngwa ngwa na ezi ahia
Usoro ahia 24-ahia
Kachasị mma maka PC yana ekwentị,
Azụmahịa dị mfe ma dịkwa mma n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla
30 nkeji azụmahịa
Belatara oge iji rite uru
Uru na ahịa bea
Họta ụkọ ọnwụ gị
Nnukwu egwu na ụgwọ ọrụ
Ochichi na enweghi ike
Ndi mmadu n’ile n’otu n’otu n’egwuregwu igba ego nke ha
Ezigbo loom n'ezie dị ka egwuregwu
Etu uzo ihe omuma nke ohuru jiri teknụzụ blockchain
Egwuregwu-dị ka azụmaahịa
Oke omumu ihe omumu
Akaụntụ Facebook nke ahia di ka ahia
Akaụntụ Twitter nke ahia di ka ahia
Ihe ndekọ banyere azụmahịa dị ka azụmaahịa
Dreadble akaụntụ nke egwuregwu dị ka egwuregwu
Njikọ njikọ Linkedin banyere azụmaahịa dị ka egwuregwu
Anyị na-eme atụmatụ inye ndị ọrụ mmetụta nke igwuri egwuregwu ịme anwansị. N’ọdịnihu, enwere ike iji akara dị iche iche zụta ma jiri ọrụ bara uru maka azụmaahịa. የሰማይ አካላት
Itinye Mepee API nke nnukwu mgbanwe
Akaụntụ Facebook nke OPEN API
Ihe ndekọ Twitter nke OPEN API
Ihe banyere akaụntụ OPEN API
Dribble akaụntụ nke OPEN API
Ihe ndekọ Linkedin nke OPEN API
N'adịghị ka ọrụ ndị ọrụ achụmnta ego ọdịnala, ọrụ ịzụ ahịa azụmahịa na-eji ezigbo Open cryptocurrency's Open API iji mee ihe ntinye na ntinye mmiri dị ka ọ dị.
Iwu Egwuregwu Efu
Iwu agha kpebiri site n'aka onye ọrụ
Akaụntụ Facebook nke iwu egwuregwu
Ihe ndekọ Twitter nke iwu egwuregwu na-akwụghị ụgwọ
Ihe ndekọ nke iwu egwuregwu na-akwụghị ụgwọ
Dribble akaụntụ nke egwuregwu egwuregwu na-enweghị ihe ọ bụla
Ihe ndekọ Linkedin nke iwu egwuregwu na-akwụghị ụgwọ
Iwu niile nke ahia azụmaahịa ka onye ọrụ kpebiri. Onye ọrụ ahụ na-ekpebi iwu site na iwu iwu ụlọ ọrụ setịpụrụ. Anyị ga-ebuso agha azụmaahịa n'etiti ndị ọrụ gbakọtara dịka iwu nke onye ọrụ si dị. Onweghi nkwekọrịta onye ọrụ banyere nsonaazụ na nkesa.
Iji ihe eji egwuri egwu
Akaụntụ Facebook nke TBet akaebe
Nkọwa Twitter nke TBet
Behance na akaụntụ TBet
Ihe ndekọ ego maka TBet
Ihe ndekọ njikọ njikọta nke TBet
Enwere ike ịchọ ihe akaebe dị iche iche iji mepụta ebe agha, a na-akwụkwa ndị akwụ ụgwọ maka agha ndị agha ahụ ụgwọ ụfọdụ ụgwọ ọrụ. A ga-ebido egwuregwu mini-dị iche iche na ọrụ ntinye obere mini. Obere obere ihe egwuregwu a bụ ihe egwuregwu nwere ike iji ya rụọ ọrụ dị iche iche iji sonye.
Usoro a pụrụ ịdabere na ya na teknụzụ
Oge ihe omume otu (30 TBET tokens)
Tinye maka onye otu
Battlezụ ahịa Ozi
Azụmazu Ahịa, -mata Ya, Akụkọ, Community Trader
Ihe karịrị otu puku na narị puku ise ekenyela aharịrị maka agha
Ulo ahia ahia anyi kariri 6 ndi pre-edebanye aha n’uwa ugbu a ubochi ato ka ekwuputara ihe omume nnabata nke June 10. Daalụ ọzọ maka mmasị na ịhụnanya gị. Anyị ga-eme ike anyị iji gosi gị ọrụ dị mma na nke ka mma iji kwụghachi mmasị gị. Daalụ m ọzọ. All ahịa agha n'elu ikpo okwu ọrụ.
Isi Nyocha TBET Token
Nnukwu Ahịa TokET Toket Ndewo, nke a bụ Ahịa Ahịa. Battlezụ ahịa Agha bụ ikpo okwu maka ndị ọrụ iji dozie iwu agha (oge, ihe nrite, wdg) ma na-ere ahịa dị iche iche na nnukwu mgbanwe iji na-eduzi agha ma na-ekpebi ọkwa iji merie ihe nrite. Taa, m ga-achọ ịkọwa ihe ngosi TBET. TBET Token Ntụle TBET Token bụ cryptocurrency nke ga - arụ ọrụ dị ka ego maka ịme ihe na iji ọrụ azụmaahịa, yana ọrụ n'ime ọgụ azụmaahịa. Mmeghe Nleba Anya Toket[...]
Ojiji nke TBET
Ojiji nke TBET eji akara TBET iji mee ihe na otutu oru enyere n’omume ahia. Na mgbakwunye, ọrụ a ga-eji rụọ ọrụ TBET ga-aga n'ihu. Unt Nweta Fkwụ Battlegwọ Battlezụ Ego Ego dị elu nke ọrụ ịzụ ahịa nwere ike ịdị iche dabere na nloghachi nke 0.01%. Na mgbakwunye, iji nweta uru na mgbanwe n'ahịa ala, kọmitii dị ala nwere nnukwu mmetụta. Ndi so na agha bu agha Okwu mmeghe nke TBET[...]
Usoro ahia ahia Blockchain
Sistemu Azụmaahịa Blockchain Anyị ga-eji teknụzụ blockchain iji kwalite nghọta nke ọgụ azụmaahịa Anyị ga-amụ iji jide n'aka na enwere ike ịme azụmahịa mgbe azụmahịa / ịzụta ikike gafere ihe akaebe nke azụmahịa azụmahịa. Iji nye oru ndi di otu a, odi nkpa itolite ihe njiri mara nke ugwo ahia. Anyị na-eji usoro blockchain sitere na ụlọ ọrụ nwere teknụzụ pụtara na nchekwa dị elu iji zụlite usoro. Okwu Mmeghe Usoro Ihe ahia ahia Blockchain[...]
Kedu ihe kpatara agha azụmaahịa na blockchain
Anyị nwere ahụmịhe n'ịgba ọrụ ịme anwansị ego cryptocurrency tupu ịkwadebe maka atụmatụ ịlụ ọgụ azụmaahịa. Anyị enwetala ọtụtụ mkpa nke ndị ọrụ site na ọrụ ahụ. N'ime ha, ọtụtụ ajụjụ sitere n'aka ndị ọrụ yana ihe na-egbochi ọrụ bụ nkwenye nke transparency of Notrading na ranking '. Anyị kpebiri iji teknụzụ KwonTrect nke smartchainụ gbasaa ọrụ anyị enwetara. Na mgbakwunye, ọtụtụ ọrụ ndị dị ugbua nwere ndị aka ha ga-eme ya. Mmeghe More Ihe mere ị ga-eji wulite ọgụ azụmaahịa na Blockchain[...]
Uru uru dị mkpa ọbụna site na iji obere ego itinye ego
〉 N’enye ọrụ iji rite uru na azụmaahịa azụmaahịa, ọ bụghị obere ego na-eweta uru, ọbụlagodi na obere ego itinye ego. Na mgbanwe dị ugbu a, enwere ike itinye ego 0.1ETH iji mepụta mkpụrụ 100%, mana enwere ike ịnweta 0.2ETH. Agbanyeghị, na ọrụ ọgụ azụmahịa anyị, ị nwere ike itinye ego 0.1 ETH ma nweta 1.0 ETH n'otu agha. Ọrụ di omimi nke na-achọpụta uru dị na ọgụ n'otu oge site na itinye ego na-eche maka mmụba mgbe itinye ego Mmeghe Ebumnuche kachasị mma na uru obere ego[...]
Visionzụ ahịa n'ọhụụ Ọrụ Ọrụ
Ọ na-ezube ịnye ọrụ ọgụ azụmahịa nke nwere ike ị nweta nlọghachi dị ukwuu na ntinye ego ọbụlagodi na isi obodo. Ọrụ azụmahịa Cryptocurrency na-edozi nsogbu mmụba nke azụmahịa site na iwulite ọrụ site na iji Open API nke mgbanwe cryptocurrency na ntinye mmiri dị ukwuu. N'ime ọrụ anyị, ikike ịzụ ahịa nke onye ọrụ bụ ihe kachasị mkpa. Ndị ọrụ niile na-abanye n'ime ụlọ ebe ha chọrọ ma na-asọrịta mpi maka iji otu akụ na-arụ ọrụ. Mmeghe Ọzọ Trading Battle Service ọhụụ[...]
Etu esi agba mgba na ọgụ dị mfe & egwuregwu obere nsogbu
Community Q. tozọ nzọ dị na egwuregwu dị mfe & egwuregwu obere nwere ike ịbụ nsogbu ma emesịa gbaa cha cha ?? CEO: Anyị nyochara ihe gbasara iwu na ọdịnaya nke nyocha ahụ, na FX na egwuregwu ndị ọzọ yiri ya bụ nsogbu n'ihi na a na-akwụghachi ha ụgwọ n'ihi ohere, mana n'ihe banyere ọrụ anyị, o siri ike ịsị na isi ihe na-akpata na-emetụta nsonaazụ ahụ. . Community Q. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo ahịa azụmahịa, ịnwere ike iji oke Intmalite ihe ị ga-eme nzọ n’agha dị mfe & Obere nsogbu egwuregwu ịgba chaa chaa[...]
Ọ nwere mgbanwe mgbanwe ị na-eme atụmatụ ịdepụta na 2020?
Ọ nwere mgbanwe mgbanwe ị na-eme atụmatụ ịdepụta na 2020? Onye isi ala: Anyị na-enye ọrụ bot maka ọtụtụ mgbanwe cryptocurrency ma soro ndị ọrụ mgbanwe. Agbanyeghị, dịka anyị kwadebere maka oge dị anya, anyị na-akwado maka ndepụta izizi na mbu mgbanwe ahụ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ inyocha ndepụta nke ọdịnihu, biko bia n'ọnụ ụlọ Telegram gị tupu ị hụ ọkwa oge. Ihe atumatu a bu oru oru aka uwa karia oru ndi Korea. Okwu Mmalite More Ọ nwere mgbanwe mgbanwe a na-eme atụmatụ ịdepụta na 2020?[...]
Enwere m ike isonye na ọtụtụ asọmpi n'otu oge?
Enwere m ike ịmepụta ọtụtụ ụlọ ma sonye n'ọtụtụ asọmpi n'otu oge? Onye isi ala: Ndị ọrụ niile nwere ike ịmepụta ụlọ ọgụ dị iche iche ma na-esonye n'ọtụtụ ụlọ ọgụ. Atụmatụ dị ugbu a na-eme atụmatụ maka ọnụọgụ mmadụ iri. Anyị na-eme atụmatụ idozi oke nke ikere òkè dị iche iche ebe anyị na-elele mkpa ndị ọrụ yana ọnọdụ iche iche. Q&A ngalaba Community Q. Ọ bụrụ na inyocha akwụkwọ ọcha ahụ, Okwu Mmalite M nwere ike isonye na ọtụtụ asọmpi n'otu oge?[...]
Naanị ọtụtụ ndị ọrụ ga-enwe ike ịlụ ọgụ maka azụmahịa
Naanị ọnụọgụ ndị ọrụ ga-enwe ike ịlụ ọgụ azụ Q. Kedụ uru dị na ndị ọrụ nwere ike inweta? Na mgbakwunye, o yiri ka a ga-enwe ọtụtụ ndị ọrụ ka ha nwee ike ịlụ ọgụ ahịa, mana enwere m agụụ ịmata ọrụ ndị akọwapụtara na atụmatụ ahịa n'ọdịnihu. Onye isi ala: Ugbu a, anatawo ọtụtụ ajụjụ na mmekorita ya na ọrụ PR na azụmaahịa na Korea na mba ofesi. Anyị na-eme atụmatụ imekọ ihe ọnụ na ndị na-ere ahịa na kọntaktị, wee hazie ihe osise n'elu ikpo okwu site na ịbanye asọmpi azụmaahịa na-agba ngwaahịa. Ewebata ndi ozo inwe agha nke ya na otutu ndi oru[...]
Sezụ ma jiri ihe ncheta TBET na ihe ndị dị ọnụ ala
Ajụjụ. Maka azụmaahịa, dozie oge na ego nara, were zụta ihe na ego nwepu ego na TBET tokens.Ihe eji eme ihe aka a iji mepụta ime ụlọ agha, kedu ihe dị iche na ọrụ ntinye ego ịme anwansị dị ugbu a? Kedu ihe ị chere bụ ihe kpatara eji arụ ọrụ agha azụmaahịa na uru (nloghachi, wdg) ị nwetara!? Onye isi ala: Aghọtara m na ebumnuche na uru nke iji ego itinye ego na usoro dị iche iche. Uru kasịnụ nke iji ọgụ azụmaahịa bụ ire akụ dijitalụ Wetakwuo Tokens Toketị ndị ọzọ, ihe dịfufu iji zụọ[...]
Trazụ ahịa agha n'ụzọ na-eme ka ego jiri ezi ahia azụmaahịa
Achọrọ. Na-enweta 0.1 ETH n'ime, mana TBET token na-ekwu na ọ bụrụgodị na ị tinye otu 100 ETH, ị nwere ike irite 2 ETH n'otu agha. N'elu elu, ọ na-adị ka azụmaahịa oke, mana ọdịiche dị n'etiti azụmaahịa oke na ọrụ azụmaahịa nke TBET tokens Romebata ndi agha ahia ahia ozo n’uzo na eme ka ego baa ezi na ahia[...]
Ihe achọrọ n’ime ụlọ agha ka a chọrọ maka ịlụ ọgụ agha
A ga-ekwupụta na ọ bụrụ na achọrọ imepụta ụlọ ime ụlọ maka azụmaahịa, yana ọnụọgụ ndị pere mpe esonyeghị na ọnụ ụlọ agha ejiri eme ihe, a gaghị akpọghachite akara aka TBET ejiri mee ihe maka okike tinyere nhichapụ ụlọ agha. Ọ bụrụ otu a, kedu ọnụ pere mpe mmadụ chọrọ ma kedu ụfọdụ ụzọ iji kwalite ụlọ ọgụ m? Onye isi ala: Ọnụ ọgụgụ mmadụ ole na ole ịmalite agha, gụnyere onye isi Mmeghe More Trading Battle chọrọ ịmepụta ụlọ agha.[...]
Kedu ihe na-aga n’ihu na ụma ụma TBET?
Ajụjụ. Site na echiche nke onye na-etinye ego, ọ ga-amasị m ka oru ngo a dịkwuo ọnụ ahịa ego ya site na mmepe na-aga n'ihu. N'ihe banyere ịlụ ọgụ, m na-eche ma ọ bụ mmemme dị mkpirikpi. Gịnị bụ ọkụ ọkụ? A na-eme emume azụmaahịa n'ọtụtụ azụmahịa n'oge site n'oge ruo n'oge. A na-enye ego maka mbata gbanwere. Olee ihe dị iche na nke ahụ? Onye isi ala: Ka ọ dị ugbu a, ọrụ atọ dị maka iji akara TBET n'ime ikpo okwu. N'ụdị nke onye ọ bụla na-eri TBET oge niile Okwu Mmalite Gini bu otutu ihe egwuriegwu TBET?[...]
Kedu otu esi eji TBET
Ajụjụ. Kedu otu esi eji TBET eme ihe? Kedu ihe dị iche site n’elu ikpo okwu dị? CEO: TBET Token bụ cryptocurrency nke ga-ahụ maka ọrụ nke ego maka ogbugbu oru ngo na ojiji nke ọrụ ọgụ agha. A na - eji ihe omuma nke TBET eme ihe na nke izizi, ego na azụmaahịa maka ụgwọ azụmahịa. Ogo nke ahia ahia agha nwere ike idi di iche oburu na nkpuru a di 0.01%. Odikwa okwu di ala Mmeghe karịa Kedu ka esi eji akara TBET?[...]
Gini bu ahia ahia ahia?
Q. Gini bu ahia ahia ahia? Ọ dị ka ebe a na-amaghị ama, mana biko kọwaa ya n'ụzọ zuru ezu. Onye isi ala: Trading Battle bụ usoro ikpo okwu na-ejikọta ihe nke'Battle 'yana ahia nke akụ dijitalụ. Ndị ọrụ na-esonye n'ụlọ agha ahụ na ego otu òkè (ETH) n'ime ikpo okwu ma zụọ ahịa n'otu oge na ego, yana elu 50% nke ndị ọrụ nwere nnukwu nloghachi na-ekenye ụgwọ itinye aka (ETH). Site na usoro ọgụ dị otú a, ndị ọrụ nwere ike ịre ahịa karịa azụmaahịa site na iji mgbanwe mgbanwe dị adị. Mmeghe karịa Gịnị bụ Trading Battle Platform?[...]
Trading Battle Project Okwu Mmalite
Ajụjụ. Biko, were obere oge kọwaa onwe gị na ọrụ gị. Onye isi ala: Ndewo. Nke a bụ Suwon Kim, CEO nke Trading Battle Project. Iji kọwaa onwe m obere oge, abụ m onye isi nchịkwa nke AviBot, abanyela na azụmaahịa maka akpaaka nke Bithumb, ma nweela teknụzụ API nyere site na mgbanwe iji gosipụta ọrụ dị ugbu a. Enwere m nsọpụrụ inwe ike ịmebata ihe omume mbụ site na Shrimp Fishing Boat. Ihe oru ngo anyi abughi ihe banyere ire na izuta ihe na ahia cryptocurrency, obu ya bu banyere ahia dijitalụ. Iwebata More Trading Battle Project Mmepe[...]
NJ Katok: 24MEX
Zerif Lite onye nrụpụta: ThemeIsle